काठमाण्डौ – कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड–१९ ले गर्दा विश्व जर्जर अहिले अवस्था पुगेको छ । स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानमा निकै अब्बल मानिएका देशलाई यो रोगसँग लड्न ठूलो सकस परिरहेको छ । मानवीय अस्तित्व बचाउन उनीहरुको दौडधुप हेर्दा लाग्छ, कोरोना भाइरसले हामीजस्तो सानो र अत्यन्तै कम अनि सीमित स्वास्थ्य क्षमता भएको देशमा तीव्र गतिमा फैलिए के होला ? त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले यो भाइरसलाई कमभन्दा मानिसमा सीमित गर्नको लागि पूर्वतयारी र रोकथाममै जोड दिनुपर्छ । भएभरका संयन्त्र हामीले यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउनुपर्छ । मान्छेको ज्यान जोगाउन सक्नु यतिखेर ठूलो सफलता हुन जान्छ ।
जीवन रक्षा र अर्थतन्त्र
अहिलेको ठूलो चुनौती भनेको जीवन रक्षा हो । तर जीवन रक्षासँग अर्थतन्त्र पनि जोडिन्छ । आर्थिक सामाजिक अवस्था र उत्पादन पनि जीवन रक्षासँगै जोडिन्छ । मैले हरेक पटक भन्ने गरेको छु, मान्छले हातमा काम, गोजीमा दाम र समाजमा नाम खोज्छ । अहिले स्वदेशमा काम गरिरहेका हुन् या विदेशमा पसिना बगाइरहेका सबैजसो युवाको चाहना पनि यही नै हो । तर कोरोना महामारीले विश्वभरको अर्थसंरचनालाई परिवर्तन गर्न लागेको छ । सामाजिक संरचना पनि परिवर्तन हुँदैछ । यसले मान्छेको सोचाइलाई समेत परिवर्तन गर्न थालेको छ ।
जस्तो पहिले पहिले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेलायत, जापान र कोरियालगायतका सम्पन्न देशमा जाने नेपालीमा त्यहाँ जान पाएकोमा गर्व महसुस हुन्थ्यो । तर अहिले उनीहरु एकपटक मातृभूमिमा फर्कन पाए जसोतसो बाँचिन्थ्यो होला, देशमै परिवारसँग रहन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने अवस्थामा रहेको पाइन्छ । बाहिर जाने सोचमा रहेकाहरुमा पनि आफ्नै देशमा बस्नुपर्ने रहेछ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास भएको देखेको छु ।
नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका छ । हाम्रो देशका युवालाई श्रम गर्न विदेश पठाएर हामीले देश धानिरहेका छौँ । सरकारको अहिलेसम्मको नीति पनि विदेशमा युवा पठाउने र त्यसको लागि धेरैभन्दा धेरै श्रम गन्तव्य खोज्ने देखिएको छ । तर अब हिजोको जस्तो गरी चल्दैन । किनकि जुन देशबाट हाम्रो देशमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँछ ती देश नै आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा पर्दैछ । कुल रेमिट्यान्सको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने खाडी देश पनि समस्यामा परेकाले ती देशले हाम्रा कामदार फर्काउने र नयाँ कामदार नलैजाने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ
यस्तै युरोप, अस्ट्रेलिया, जापान र कोरियालगायतका देश गएका धेरै नेपाली बेरोजगार हुने सम्भावना छ । उनीहरु पनि त्यहाँ टिक्न सकेनन् भने नेपालमै आउँछन् । ती देशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि ठूलो मात्रामा ओरालो लाग्दैछ । त्यसैले अब हाम्रो देशमा रेमिट्यान्सको हिस्सा निकै ठूलो अङ्कले घट्नेवाला छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती थपिदिएको छ ।
कृषि र पशुपालनमा जोड
यसअघि सजिलैसँग युवालाई विदेश पठाएपछि सरकारलाई देशमा धेरै बेरोजगार भए भन्ने चिन्ता नहुने र हाइसञ्चो हुने भएको थियो । तर अब त्यो अवस्था उल्टिनेवाला छ । अब लाखौँ युवा नेपाल फर्किएपछि व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती देखिनेछ ।
नेपालबाट श्रमको लागि विदेश जाने युवा कम हुनेछन् । किनकि कोरोनाको कारण नेपालीको श्रम गन्तव्य रहेका देशमा पनि आर्थिक सङ्कट सुरु भएको छ । अर्कोतिर अब नेपालमै केही गर्नुपर्ने रहेछ, सुरक्षित त यहाँ पो रहेछ र मर्नै परे आफ्नै देशमा, समाज या परिवारकै वरपर मर्न पाइने रहेछ भन्ने खालको सोच पनि कोरोनाको प्रकोपले गर्दा विकसित भएको छ ।
त्यसैले अब कृषि, पशुपालन र वन क्षेत्रको पूर्ण सदुपयोग गर्नुपर्छ । गाउँघरका बाँझा खेतबारीमा खेती गर्नुपर्छ । विदेशबाट सीप सिकेर आएका युवाले त्यो सीप आफ्नै पाखापखेरामा देखाउने बेला आएको छ । त्यसको लागि सरकारले सहुलियत ऋणदेखि, मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन, कृषकको उत्पादनको ग्यारेन्टी पनि सरकारले लिनुपर्छ ।
किसानले दुध बिक्री नभएर सडकमा पोख्ने, तरकारी बिक्री नभएर बारीमै जोतिने र उखु किसानले भुक्तानी नपाएकोजस्ता घटनाले कृषि पेशा अँगाल्न चाहनेहरुमा निराशा पैदा भएको छ । तर तपाईंको उत्पादन हामीले किन्छौँ भनेर सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसोगर्दा लाखौँ रोजगारी देशमै सिर्जना हुन सक्छ ।
अर्को कुरा, हामीले अब अर्गानिक कृषिमा जोड गर्नुपर्छ । अर्गानिक खेती गर्दा एकातिर हाम्रो वातावरण कम प्रदुषित हुन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढ्छ ।
हामीले अब वनको सदुपयोग गर्नुपर्छ । वन जोगाउने नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खेर गएको छ । वातावरणमा असर नपर्नेगरी रुख काट्ने रोप्ने गर्नुपर्छ । अर्बौँ रुपैयाँको काठ आयात गर्ने तर देशमै भएका काठ कुहिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । वनको सदुपयोग गरेर पनि धेरैलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।
तरकारी, फलफुल र खाद्यान्नलगायतमा हामीले २ खर्ब रुपैयाँ बर्सेनि विदेश पठाउँछौँ । अब पाखापखेरामा खेती गरौँ र विदेशिनै पैसा जोगाऔँ । रेमिट्यान्समा आउने कमीलाई हामीले यसरी पूर्ति गर्न सक्छौँ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीभन्दा फरक
भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको थियो । अर्थतन्त्रको ‘नेगेटिभ’ वृद्धिदरको चिन्ता थियो । तर त्यसलाई हामीले सजिलैसँग ट्रयाकमा ल्याएका थियौँ । किनकि भूकम्पले नेपालमा मात्रै क्षति गरेको थियो । नाकाबन्दीले हामीलाई मात्रै समस्या पारेको थियो । हामीलाई सहयोग गर्ने दाताहरुलाई केही फरक परेको थिएन । मनग्य सहयोग पनि पायौँ । युवाहरु विदेश जाने क्रम झन् बढ्यो । रेमिट्यान्स थपियो । अर्थतन्त्र लयमा आयो ।
तर अहिले भने अवस्था त्यस्तो छैन । संसारभरको अवस्था डरलाग्दो छ । नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्ने र नेपाली श्रमिक लैजाने देशहरु सङ्कटमा परेकाले पहिलेभन्दा वैदेशिक सहयोग या ऋणमा ठूलो गिरावट आउन सक्छ । हाम्रो देशमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नआउन सक्छ । किनकि अहिले हरेक देशमा समस्या परेकाले लगानीकर्तालाई आफ्नै देशमा लगानी गर्न बाध्य बनाउन सक्छ ।
विश्व बैंक, आइएमएफ र एसियाली विकास बैंकलगायतका बहुराष्ट्रिय संस्थामा विकसित र ठूला देशले गर्ने लगानी कम हुँदा ती संस्थाले नेपाललाई दिने अनुदानमा कटौती हुन सक्छ । नेपालको मात्रै समस्या हुँदा विदेशी सहयोग आउँथ्यो तर अहिले समस्या विश्वभरि नै छ । त्यसैले आफ्नो लागि आफैँ गर्ने बेला आएको छ ।
(डा. अधिकारीसँग अर्जुन पाख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)